Inta badan macluumaadka qormooyinka aan diidno waa qoraallo si fudud loogu qoro qolalka oo qof ku duubay naqshad qurux badan. Infographics maahan sawir qurxoon. Waa inay noqdaan muuqaal muuqaal ah oo macluumaad aan si fudud loogu sharixi karin qoraalka. Mawduuca ama sheekada ka dambeysa qaab-hawleedku waa inay si taxaddar leh u sawiraan sawir ka caawinaya kormeeraha inuu fahmo oo haysto macluumaadka aad siineyso. Waxyaabaha xogta laga helaana waa inay taageeraan sheekada aad bixinayso - taasoo ka dhigaysa goobjoogaha inuu fahmo saamaynta dhibaatada iyo / ama xalka.
Infographic-ku wuxuu ku dhex socdaa suuq-galiyaha waxyaabaha uu ka kooban yahay istiraatiijiyadaha kala duwan - sida sawirrada, qaab qorista, jaantusyada iyo garaafyada, midabka, astaamaha, astaamaha, fiidyowyada iyo sawir-gacmeedka - kuwaas oo gacan ka geysanaya sidii aragti ahaan loogu faafin lahaa sheekada aad sheegeyso. Waxayna siiyaan macluumaadka taageeraya!